PEEK / PPSU Rod / Board / Pipe Extrusion Line - China PEEK / PPSU Rod / Board / Pipe Extrusion Line mpamatsy, Factory –Jwell
1, PEEK （polyether-ether-ketone） ， dia fitaovana polymer thermoplastic kristaly misy hafanana miempo 334 ℃. Manana tombony amin'ny tanjaky ny mekanika avo, ny fanoherana ny hafanana avo, ny fanoherana ny fiatraikany, ny faharetan'ny lelafo, ny fanoherana ny asidra sy ny alkali, ny fanoherana ny hydrolysis, ny fanoherana ny havokavoka, ny fanoherana ny taratra ary ny fananana mandeha amin'ny herinaratra tsara.
2, Manana teboka miempo ambony (334 ℃) sy mari-pana amin'ny tetezamita fitaratra (143 ℃), mari-pana fampiasana 260 ℃.
3, ny fenitra ekena amin'ny fandrefesana ny flammability ny fitaovana dia UL94, ary ny vokatry ny PEEK dia V-0, izay ny haavon'ny fihenan'ny lelafo.
4, fanoherana ny havizanana tsara amin'ny fifandimbiasana mifandimby azo ampitahaina amin'ny akora firaka.
5, PEEK dia be mpampiasa amin'ny aerospace, automotive, herinaratra ary elektronika, fikarakarana ara-pahasalamana sy sakafo.
PPSU dia polyphenylene sulfide, karazana plastika injeniera thermoplastic miaraka amin'ny fahombiazana feno. Ny endri-javatra miavaka dia ny fanoherana ny hafanana avo, ny fanoherana ny harafesina ary ny toetra mekanika ambony.
Ny hafanan'ny PEEK miasa maharitra hatramin'ny -100 ℃ ka hatramin'ny 250 ℃, dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny aérospace, médical, pharmaceutique ary fikarakarana sakafo, toy ny singa mpandalina gasikara mpanadihady amin'ny zanabolana, lelam-pamokarana hafanana, ny fanoherana mahery vaika amboniny no mahatonga azy io fitaovana tsara indrindra ho an'ny fampiharana fikorontanana toa ny bearings, bearings tsotra, seza valizy, tombo-kase ary peratra fitondra paompy.
Ny tena fampiasana ny PPSU dia eo amin'ny sehatry ny fitaovana elektronika, toy ny fanaovana taolana mpanova, bobbins coil haingam-pandeha, plugs, sockets, frame, tariby, amponga ampongaina ary faritra samihafa.
Tahan'ny revolisiona lehibe
JWZ-BMQC30 / 50/100/160 Masinina mitsivalana
PE Geomembrane tsipika fanamafisana tantera-drano